Izinja zithola amamaki aphelele ngokuhogela i-Covid | Scrolla Izindaba
Izinja zithola amamaki aphelele ngokuhogela i-Covid
Ngesikhathi umhlaba uxakekile ukuthola izinsizakusebenza zokuhlola ezisheshayo futhi ezilula zokuhlola i-Covid, kubukeka sengathi izinja kungaba yimpendulo.
Kuke kwaba nokuhlolwa kwe-Covid ngezinja phambilini, kepha e-Finland bathole cishe izinga lokuphumelela elingamaphesenti ayi-100 esivivinyweni esisha.
Ngisho nezinsuku ngaphambi kokuba isiguli sibe nezimpawu.
Izinja ezine seziqalile umsebenzi wokuhogela i-Covid enhlokodolobha yezwe i-Helsinki.
Abaphenyi e-University of Helsinki bathe izinja ziyakwazi ukubona i-coronavirus ngemizuzwana engaphansi kweshumi – okusho ukuthi le ndlela yonga imali.
“Kuyathembisa kakhulu. Uma kungasebenza, kungakhombisa indlela enhle yokuhlola kwezinye izindawo, ”kusho uAnna Hielm-Björkman wase-University of Helsinki.
Ngemuva kokuqoqa imithwalo yabo, abagibeli bamanye amazwe abafikayo bacelwa ukuthi basule izintamo zabo ngama-wipes. Kwelinye idokodo, imbiza equkethe isisuli ibekwa eceleni kwezinye eziqukethe iphunga elihlukile. Inja bese iqala ukuhogela, kubika i-Guardian.
Inja ikhombisa ukuthi ithole leli gciwane ngokuncipha, noma ngokulala phansi.
Uma uvumile, umgibeli ube esehlolwa futhi ukuqinisekisa isinqumo.